Iimephu zeGPS zeVenezuela, iPeru, iColombia kunye noMbindi Merika-iGeofumadas
NgoJuni, 2011 GPS / Izixhobo, ezintsha, Uhambo
Le projekthi yokubambisana yokudala nokuhlaziywa kweemephu zeendlela ze-GPS. Wazalelwa eVenezuela kodwa kuncinci kuye kwandiselwa kwamanye amazwe asePanishi ngexesha apho izicelo eziphathekayo zithandwa kwaye intanethi ifumaneka.
Ndilithandile elinye lamabali elipapashwe kwiphephandaba laseVenezuela malunga nale projekthi, malunga nokuba kwakunjani ukunika idilesi yasemaphandleni ngaphambi kokubeka ubuchwepheshe. Olu luhlobo oluhlengahlengisiweyo:
Uhamba nge-paved, ujika ngakwesokudla nje apho kukho umthi we-Quebracho ecaleni komnyango wemivalo ...
Zonke iimitha ze-100 kukho umthi we-Quebracho, ukuba sidibanisa ... kwaye ngathi umnyango we-trancas wawumgangatho.
Uhamba nge-gazebo kwaye uwela khona ...
Ujikeleze, ujikeleze ... kuMbindi Merika, ujikelezo lubizwa ngokuba yindawo apho bathengisa khona iziselo ezibandayo kunye neelekese. Indawo ejikelezayo ye-UTM ibizwa ngokuba kukudibana kweendlela ezininzi. Iidigri ezili-14 ngezantsi koko bakubiza ngokuba yigadi ... kwaye i-crusader ifana nokusika imithambo yakho kumaXesha Aphakathi.
Emva koko, ulandela indlela ye-enchagüitada, phakathi kwezicingo zombini ze-barbed wire, kwaye xa ufikelela kwinqanaba, uthatha elinye kwicala lezote ...
Izote, izote, oko kuza kuba, kufuneka ibe njenge-chagüite ...
Uza kudlula kwinqanaba lemininzi imithi ...
Uyaqhubeka, kwaye kufuneka uqaphele ukuba ujike ngasekunene apho kukho iqrijini elidala elilahliwe ...
Ngenye imini abakwaGuanacos bachitha ingqokelela yezinto ezilahliweyo ukuze zisetyenziselwe ukuphinda zisetyenziswe kwaye yayililo kanye idilesi. Usodolophu ufumene nesicelo kwikomishini yezokhenketho sokuba babeke ifriji ekwimeko embi apho ukunqanda ukubhideka.
Namhlanje kunye nezikhangeli yonke into itshintshile, ukusuka kwezo zisetyenziselwa isithuthi njengezicelo ezinokukhutshelwa kwifowuni ephathwayo okanye kwithebhulethi ye-Ipad. Le projekthi yendlela inegalelo elikhulu kuluntu lwabasebenzisi abaluthandayo olu hlobo lwezinto zokuzonwabisa kwaye bahamba neGarmin kwideski ngalo lonke ixesha, kananjalo ukunqanda iingxaki xa usenza uhambo oluya kwindawo engaziwayo yamazwe akweleenjiko .
Kuya kufuneka ungene ngaphakathi, ukuze ubone yonke into enikelwe luluntu, kuba kuya kufuneka ufumane amaqhinga okuhlaziya inguqu kwiselfowuni kwaye iimephu azisebenzi kwimodeli nganye. Kodwa kufuneka iqatshelwe into yokuba amanyathelo anje ngala abalulekile kwintsebenzo yabo.
Ndiyishiya ezinye iimbonki zengxoxo kunye nemiyalezo yokudibanisa eyenza le projekthi ikhulume.
Eli ligama leprojekthi eVenezuela, ilizwe apho ukufikelela kwi-Intanethi kwi-Intanethi kushiye i-denominator yabantu abathetha iSpanish. Ukusukela oko yaqala ngo-2003, ihambele phambili ngokweemephu, amanqaku anomdla kunye nolwazi malunga neendlela ze4 × 4 zezithuthi kunye neendlela zokuhamba.
Ngokunyaniseka, iVenrut yenye yeemephu zeGPS ezilungileyo emhlabeni, kwaye ndizithelekisile. Siyavuyisana nomsebenzi obalaseleyo weAAA.
Eli ligama leprojekthi ePeru, iphambili kakhulu kwaye ineenkcukacha. Uluntu lweli lizwe luyasebenza kwezi zifundo ngokwemvelo.
Ukuhlaziywa okufutshane kwenguqu ye-3.10: Njengabo baqala ngaphambili, le mephu ikhabe iesile.
Ichanekileyo kwaye ithembekile kuneemephu zikaGoogle. Kwaye kuyamangalisa ukuba ingafumana kangaphi eyona ndlela isebenzayo yokuxoxa nge-maze-like "zona urbanas" zasePeru nokuba ukude kangakanani kwigridi ocinga ukuba uyiyo.
Kudos ukuya ePerut.org ngomsebenzi wayo omangalisayo.
Oku kukwiColombia, kuhamba kancinci kunaseVenezuela nasePeru kodwa inamandla amakhulu kweli lizwe apho iindlela zasemaphandleni zingumceli mngeni. Kananjalo okwangoku uyilo olulinganiselweyo, kunye nesiphumo esimenyezelayo esimenyezelayo esenza ukuba ufune ukuvala iphepha.
Okokuqala, ukuvuyisana ngale projekthi ibalaseleyo. Ndisuka eMedellin kwaye ndisebenzisa icolrut 11.4.2 kwi-Nüvi 1390T, imephu isebenza kakuhle. Ndiyakuxelela ukuba ndinomdla wokubonelela ngendawo kunye nokuncedisa ezinye izitalato ezingabekwanga, kungoko ndibhalela wena undixelele ukuba ndingakunceda njani ugcwalise imephu (ubuncinci leyo iseMedellín).
Oku kutsha nje, akukho nonyaka ubudala kodwa ikhule ngokukhawuleza kakhulu kuba igubungela iimephu zeHonduras, iNicaragua, iCosta Rica, i-El Salvador, iGuatemala, iPanama kunye neBelize. I-portal yakhelwe kwisicelo seforum, esinika intsebenzo ethile kunye nolawulo oluncedo ngaphezulu kwamanye amazwe.
Ngoku kutshanje badibanise umgca weendlela zokungqinelana kumitha nganye ye-50, eyongezwa kwiinkalo ezifunyanwa nguMayo:
Iikhilomitha ze-70,771 ezindleleni
Iipetroli zeNkonzo ze-1,125
I-1,067 ATM kunye / okanye Iinkonzo zeBhanki
Izikolo ze-928 kunye / okanye iiyunivesithi
2369 Iindawo zokutya
Eyona nto ibalulekileyo, ihle kakhulu, ihle kakhulu!
Ndifake i-CenRut 24 kwi-Nüvi 265 yam kwaye isebenza ngokugqibeleleyo. Kuya kuba kuhle kum, ekubeni siya eBoquete ukutyelela umhlobo kwiveki eyingcwele.
Ndifumanise ukuba, njengo "ñapa", kukho neemephu zaseNicaragua. Sinosapho eManagua naseChichigalpa, ngoko ayizukusebenza.
Awazi ukuba ndivuyiswa njani, kwaye kulula kangakanani ukufakela. Ukuba ufuna into evela eTicolandia, ndixelele.
Ngexesha elifanelekileyo lomsebenzi oqalwe nguDavid, kwaye ngoku ugijima kwilizwe ngalinye Ivo, uCarlos noWilly.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Uyenza njani isalathiso esizenzekelayo ngeMicrosoft Word
Post Next Iimephu ezininzi ze-AutoCAD, i-Civil 3D ne-Desktop i-DesktopOkulandelayo »